बंगालमा कम्युनिस्ट पत्तासाफको स्थितिमा !
काठमाडौं – लोकसभा चुनावपछि भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूको पत्तासाफ हुने देखिएको छ । सीपीएमले भारतीय राजनीतिमा उपस्थिति देखाउने आधार पश्चिम बंगाल र केरला मात्र हो । त्रिपुराको गढ उसले भाजपाविरुद्ध गुमाएको छ ।
राजगञ्जबाट चुनाव लडिरहेका मोहम्मद सलीमले पश्चिम बंगालमा सीपीएमको लाज बचाउन सक्छन् । जादवपुरमा सीपीएमका विकास भट्टाचार्यले टक्कर दिने अपेक्षा छ तर टीएमसीविरुद्धको मत सीपीएमले भाजपासँग बाँड्नुपर्ने हुन सक्छ किनकि यस निर्वाचन क्षेत्रमा भाजपाको उपस्थिति बढिरहेको छ । डायमन्ड हार्बरमा फुआद हलिमले ममता बनर्जीका विवादास्पद भतिजा अभिषेक बनर्जीलाई कडा टक्कर दिने अपेक्षा छ ।
सीपीएमप्रति सहानुभूति राख्नेहरूले यो सम्भाव्यतालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षसम्म एकछत्र राज गरेको सीपीएम यस्तो स्थितिमा आउन सक्छ भनी कसले सोचेको थियो ?
मार्च महिनामा सीपीएमका विधायक खगेन मुर्मु भाजपामा प्रवेश गरे र उनी अहिले पार्टीका तर्फबाट माल्दा उत्तरमा उम्मेदवार छन् । अन्य दल जस्तो सीपीएम सदस्यहरूले राजनीतिक बफादारिता परिवर्तन गर्दैनन् ।
अलीमुद्दीन स्ट्रीटमा रहेको सीपीएम मुख्यालय यो हप्ता खाली देखिन्थ्यो । विगतमा यस्तो दृश्य देखिँदैनथियो । काँठ इलाका र ग्रामीण क्षेत्रमा सीपीएमको चुनाव प्रचार खासै देखिँदैन । पर्खाल र होर्डिङ बोर्डमा भाजपा र तृणमूल कांग्रेसको पकड छ । पार्टीको पत्रिका गणशक्तिलाई पर्खालमा टाँस्ने काम पाएका कार्यकर्ताहरू स्वयंले भाजपाका लागि काम गरेको स्वीकारेका छन् ।
अघिल्लो साता पूर्व मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले आफ्ना पार्टीका सदस्यलाई भाजपाको आगोमा फाल नहान्न चेतावनी दिए ।
‘त्यसको खतरा छ । हाम्रो दलमा अतिक्रमण भएका छन् । हामीले यस्ता परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । तृणमूलको तातो कराहीबाट भाजपाको आगोमा हाम्फाल्नु राम्रो कुरा हो र ?’ भट्टाचार्यले सोधे ।
कांग्रेस समेतले साह्रै खराब प्रदर्शन गरियो भने पनि चारवटा सीट जित्ने अपेक्षा गरेको छ र त्यसभन्दा अलिक बढी जित्ने आशा पालेको छ । तर सीपीएममा त त्यति पनि आशा छैन ।
सीपीएमका केन्द्रीय कमिटी सदस्य मृदुल देले पार्टी अहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा रहने दाबी गरे । तर उनले पार्टीले बढी सीट जित्ने भन्दा पनि भोट शेयर बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । सन् २०१४ मा प्राप्त भारी असफलताबाट पार्टीले पाठ सिकेको उनको भनाइ छ ।
टीएमसी र भाजपाबीच पश्चिम बंगालमा कडा संघर्ष भइरहेपनि देले तर्क गरे, ‘यी दुई दलले धेरै सीटका लागि एकअर्कासँग सम्झौता गरेका छन् ।’
तर उनको भनाइलाई कसैले पत्याएको देखिँदैन किनकि भाजपाले बंगालबाट टीएमसीलाई हटाउने नै लक्ष्य लिएको छ ।
‘यी दुई दलले साम्प्रदायिकताका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्,’ देले भने, ‘सन् २०१४ देखि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले पश्चिम बंगालमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ । विगत दुई वर्षमा हामीले साम्प्रदायिक हिंसाका ससाना घटना देखेका छौं ।’
सीपीएम नेताले थपे, ‘ममता बनर्जीको शासनमा टीएमसी सरकारले हाम्रा कार्यकर्ताविरुद्ध ८४ हजारभन्दा बढी झूटा मुद्दा दायर गरेको छ ।’
द टाइम्स अफ इन्डिया